Soosaarayaasha shinnida ee loo yaqaan 'Shiinaha Square iyo alaabada' | Jiuhe
Quudhida laba jibaaran
Noocan kaarboon Kaarboon-ka Karbarta leh ee loo yaqaan "carbon Car steel Zinc Plated Square Nut" wuxuu ka samaysan yahay bir aad u tayo wanaagsan oo tayo wanaagsan leh kuna shaqeynaya. Dusha sare waxaa lagu daboolay lakab zinc ah oo loogu talagalay suuxinta iyo ka hortagga miridhku. Waxay sida caadiga ah lashaqeeysaa biinanka (baararka ama boorarka) xargaha dibedda waxayna adeegsataa isku xirka gudaha iyo banaanka si loo adkeeyo laba qaybood oo iskuxiran, qaybaha, iwm. Marka la uruurayo iyo kala furfuridda Karbaashka Sunta Kaarboon Sanka Karbaashka Cirrid Nut with a wrench, ma fududa isku shaandheyn, laakiin waxaad kaliya u isticmaali kartaa khariidad toosan oo la hagaajin karo, khaanad dhimatay, ujeedo laba ah (furitaan), ama jeexjeex gaar ah oo labajibbaaran oo isku-urursan iyo kala-baxa ah.
Waxa intaa u dheer, waxay leedahay faa iidooyinka ugu sarreeya ee xajmiga yar, miisaanka fudud, iska caabbinta dillaaca, dusha jilicsan, xirashada iska caabbinta, saxnaanta sare, kharashyada hooseeya, cimri dheer isticmaalka iyo sidoo kale qiimaha sare oo wax ku ool ah. Carbon steel Zinc Plated Square Nut waxay ku habboon tahay isu imaatinka gawaarida, warshadaha korantada, warshadaha dhismooyinka, injineeriyada buundada, warshadaha wax soosaarka warshadaha, warshadaha guryaha, warshadaha korontada, qalabka isgaarsiinta, qurxinta dhismaha, warshadaha farsamada iyo korontada, warshadaha wax lagu karsado ee caaryada, warshadaha dharka, warshadaha duulista, soosaarka tareenka militariga, iwm. Waxay ku heshay sumcad wanaagsan macaamiisha adduunka oo dhan uguna wacan tahay waxqabadka sare.
Kaarboon Naxaasta ka sameysan ee nafaqada leh waxay leeyihiin acid wanaagsan iyo iska caabin alkali, kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'PVDF nuts' waxaa ku xiga polypropylene, oo labaduba leh aashitada adag iyo iska caabbinta alkali, halka loo yaqaan 'nylon nuts' ay leeyihiin acid iyo liidata alkali marka loo barbar dhigo kuwii hore. Sidaa daraadeed, nafaqooyinka nylon, gaar ahaan lawska loo yaqaan 'PVDF nuts', waxaa si weyn loogu isticmaalaa aashitada iyo jawiga iska caabin ee alwaaxda qaar ka mid ah warshadaha korantada.
Dhameystir Midabka Zinc
Fasalka 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Nooca madaxa laba jibaaran
Xidhmada Kartoondo + Xidhmo caag ah
Waxaan shaybaarada bilaashka ah ku bixin karnaa 7 maalmood gudahood haddii caaryada la hayo / haysto, oo kadib amarkii la xaqiijiyo, waxaan soo celin doonaa muunad xamuulka.
Waxa ugu wanaagsan xarkaha wiishka xarkaha birta aan cillad lahayn
kaarboon bir ah
cad ama zinc steel ama madow
is adkeyn, ganaax
dhismaha mashiinada warshadaha
Hore: Flange nut
Xiga: Quful lowska
Budo xoog leh oo nafaqo leh